Kahor kulanka sabtida ee horyaalka La Liga Atletico Madrid oo dhibane u ah Lionel Messi – Gool FM
Kahor kulanka sabtida ee horyaalka La Liga Atletico Madrid oo dhibane u ah Lionel Messi
(Barcelona) 22 Nof 2018. Lionel Messi ayaa isku diyaarinaya kulan adag ee horyaalka La Liga ay Sabtida ku booqan doonaan kooxda Atletico Madrid garoonka Wanda Metropolitano.
Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha uu ugu jecelyahay Lionel Messi inuu ka hor yimaado tan iyo bilawga xirfadiisa kubada cagta, sababtoo ah waxay ka mid tahay kooxaha uu goolasha ugu badan ka soo dhaliyay kadib Sevilla uu kasoo dhaliyay 32.
Messi ayaa kaga soo dhaiyay Atletico Madrid 36 kulan uu kaga horyimid tartamada oo dhan 28 gool, wuxuuna sidoo kale ku caawiyay 5 gool kale.
Marka ay tahay kulamada horyaalka La Liga oo kaliya wuxuu kaga horyimid kooxda Atletico Madrid 24 kulan, wuxuu kulamadan kaga dhaliyay 23 gool, wuxuuna sidoo kale ku caawiyay 5 gool kale, taasoo ka dhigan isku darka inuu ka qeyb qaatay 28 gool ay Barca kaga dhalisay Atletico horyaalka La Liga.
Lio ayaa dhinaca kale isha ku haya in goolkiisa ugu horeeyay uu ku dhaliyo garoonka Wanda Metropolitano, maadaama uu kusoo fashilmay inuu sidaas ku sameeyo xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Laakiin dhinaca kale Messi ayaa Atletico Madrid kaga soo dhaliyay garoonkeedii hore ee Vicente Calderón 12 gool, kulamadii ay kooxda Barcelona ku booqatay.
Sidoo kale Messi ayaa 2 jeer ka dhaliyay goolasha saddexleyda ah kooxda Atletico Madrid xirfadiisa kubada cagta, tan koowaad ayaa ahayd lugta koowaad kulan wareega 16-ka ee Copa del Rey xili ciyaareedkii 2008-2009, halka saddexleyda labaad ay ahayd xili ciyaareedkii 2011/2012 kulanka lugta hore horyaalka La Liga ay Barca guul ku gaartay 5-0.
Kulamadan 36-da ah uu Messi kaga hor yimid kooxda Atletico Madrid xirfadiisa Barcelona wuxuu guul gaaray 22 kulan, 8 kulan waxay wada galeen barbaro iyo 6 guuldaro ah, wuxuuna inta uu kulamadan ka qeyb galay uu qaatay 12 kaarka digniinta ama jaalaha ah, waana kooxda ugu badan uu kaarka jaalaha ku qaato, taasoo muujineysa sida kulamada labada kooxood isaga horyimaadaan uu u adag yahay.
Drogba oo Ciyaaraha ka Fariistay isagoona reebay SAWIR iyo FARIITAN XAMAASADA LEH...(Aqri)
Haddii ay kaa bad-badatay AMMAANTA Kante waxaa iminka la ogaaday CEEBTIISA....(Willian iyo Luiz oo kashifay...)